किन खाली पेटमा दूध नपिउने ? - Ankuran Khabar
२०७७ भाद्र १९0
आयुर्वेदका अनुसार यदि खाली पेटमा दूध पिउने गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई खोकी र चिसो लाग्न सक्छ । साथै, फ्लुको समस्या पनि हुनसक्छ ।
यसका साथै अन्य समस्याहरु पनि हुन सक्छन्ः
१.दिनभर आलस्य र थकान महसुस
विज्ञानका अनुसार यदि तपाईं खाली पेटमा भारी आहारको सेवन गर्नुहुन्छ भने पचाउन समस्या हुन्छ । यदि तपाईं बिहान दूध पिउँदा दिनभर शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो । बिहानै दूध पिउँदा दिनभरी निन्द्रा लाग्ने र आलस्य हुने समस्या पैदा हुन्छ ।
२. पेटमा भारीपन महसुस
यदि तपाईं बिहान हरेक दिन दूध पिउनुहुन्छ भने तपाईंको पेटमा भारी महसुस हुन्छ । कहिले काँही खाली पेटमा दूध पिउँदा पेटमा गडबढी समेत पैदा गर्छ । पाचन तन्तुले दूध पचाउन नसक्दा पेटमा खराबी पैदा हुन्छ । त्यसैले राति सुत्नुभन्दा अगाडि दूध पिउने गर्नुपर्छ ।
३. मुड खराब गर्नसक्छ
जो व्यक्ति बिहानै दूध पिउँछन् ती व्यक्तिहरुको मुखमा स्वाद बिगार्न पनि सक्छ । साथै, मुखको स्वादमा आउने परिवर्तनले मुड खराब हुने, चिढचिढावट हुने आदि समस्या पैदा गर्छ । त्यसैले दूध खाना खाएपछि पिउने गर्नुपर्छ र अलैँचीको धुलो, चक्लेट पाउडर आदि हालेर खान सकिन्छ ।
यसका साथै हाइपर एसिडिक समस्या भएका व्यक्तिहरुले क्याल्शियमको रुपमा चिसो दूध पिउँदा ग्यास र अपच जस्ता समस्या कम हुन्छ । यद्यपि, यो जब एसिडसँग मिसिन्छ तब नुनको रुपमा परिवर्तन हुन्छ जसले गर्दा एसिडिटीबाट राहत मिल्छ । दूध रातिमा पिउँदा फाइदाजनक हुन्छ । एजेन्सी
स्याङ्जामा दुई सातापछि थपिए कोरोना संक्रमित
रुपन्देहीमा ३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या १४ पुग्यो